Soosaarayaasha barroosinka | Shiinaha Qeybiyeyaasha bolt
Mashiinka kulul ee galvanized
Quusin kulul lowska galvanized
Mashiinka Hot galvanized qaybo gundhig
Qalabka birta ah
Qod silig dabada ka qoda
Torsional xiirid bolt for st ...
Laba gees oo weyn oo laba geesle ah ...
Cilindrical madaxa alxanka alxanka
Alaabooyinka u adeegaya baahiyaha caafimaad ee dadweynaha. Sida laga soo xigtay WHO, alaabooyinkan waa in la helaa "marwalba, qaddar ku filan oo ku saabsan foomamka qiyaasta habboon, oo leh tayo la hubo iyo macluumaad ku filan, iyo qiime qofka iyo bulshada ay awoodi karaan". Alaabooyinka u adeegaya baahiyaha caafimaad ee dadweynaha. Sida laga soo xigtay WHO, alaabooyinkan waa in la helaa "marwalba, qaddar ku filan oo ku saabsan foomamka qiyaasta habboon, oo leh tayo la hubo iyo macluumaad ku filan, iyo qiime qofka iyo bulshada ay awoodi karaan".
Alxanka saxanka alxanka
Alxanka alxanka saxanka alwaax waa nooc boolal ah oo loo isticmaalo goobta dhismaha. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'adkeynin' barroosinka saxan barroosinka adkaynta, alxanka barroosinka alxanka, bareesada barroosinka '' claw '', 'feed feed plate anchor bolt'
Qalabka 7-qaabeeya waa nooc ka mid ah boolal loo isticmaalo goobta dhismaha, oo leh qaab 7 qaab ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'ancho plate plate', barroosinka alwaaxa xoojiya, bareesada barroosinka, alwaaxa cilaaqda, boodhka barroosinka, biraha barroosinka, silig barroosinka, iwm. Waxaa si gaar ah loogu aasay sibidh
Qalabka 9-ka ah waa nooc ka mid ah boolal loo isticmaalo goobta dhismaha, oo leh qaab 9 qaab ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xoojinta barroosinka saxanka barroosinka la xoojiyay, alwaax barroosinka alxanka, alwaaxa cijarka 'barka suumanka', 'tendon plate plate anchot bolt, barroosinka' anchor bolt ', barroosinka fur, silig barroosinka, iwm.
Dhexdhexaad kulul galvanized barkin barroosinka
Hot-maquufin galvanized barroosinka waa nooc ka mid ah boolal loo isticmaalo goobta dhismaha. Ka dib markii diirimaad kulul lagu nadiifiyo dusha sare, waxay ka ciyaari kartaa ka hortagga daxalka. Alias ​​adkaynaya barroosinka saxan barroosinka, alxanka barroosinka alxanka, barroosinka suumanka barroosinka
SOO DHAWAADA LA TASHIGA
Tesla's Elon Musk wuxuu ka hadlayaa hal naqshadeynta tuurista iyo istiraatiijiyadda dayactirka isku dhaca
Hebei tailian dhejiska waxsoosaarka co., Ltd waxaa loo xushay mid ka mid ah 500 ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Shiinaha.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. ayaa ku soo laabatay shaqadeeda iyada oo xawli ku socota
International Hardware City c3-3, Degmada Yongnian, Handan City, Gobolka Hebei, Shiinaha
Fakis: 0086- （0） 310-6666399